योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिंदै
रिपोर्टबिहिवार, आश्विन २६, २०७४
उनका अनुसार, पुनःसंरचनापछि आयोगले संघहरूबीचको स्रोत सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन र विकासलाई अगाडि बढाउन रणनीतिक पहल गर्नेछ । गठन आदेशमार्फत पुनःसंरचना हुन लागेको आयोगको वैधानिकताका लागि ऐन नै ल्याउने तयारी छ । अबको आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बढीमा पाँच सदस्य रहने छरितो विज्ञ समूह हुनेछ ।
उपाध्यक्ष र सदस्यहरू विद्यावारिधि तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगलाई चाहिने योग्य कर्मचारी सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन मिल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारी मात्र आयोगमा रहने व्यवस्थाले कतिपय सन्दर्भमा काविलहरूलाई ल्याउन अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । आयोगका पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपाल आयोगलाई सार्वजनिक नीति र योजना अनुसन्धानमा केन्द्रित बनाउन यी सब परिवर्तन आवश्यक परेको बताउँछन् ।
डा. गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्री
नेपालले ‘टप टु बटम’ विकासको यो अवधारणालाई २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग बनाएर अपनाएको थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्र अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना परिषद्ले मन्त्रिपरिषद् सरह अधिकार लिएको थियो ।
२०२० मा परिषद्लाई पनि विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निकाय बनाइयो, जसलाई पछि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगले प्रतिस्थापन ग¥यो । २०२५ पछि मात्रै आयोगले नीति र योजना निर्माणको काम थालेको देखिन्छ ।
विकास माथिबाट तल जान्छ भन्ने अवधारणा अनुसारको योजनाबद्ध विकासलाई नेपालले २०४७ सालको उदारीकरणपछि पनि निरन्तरता दियो, तर छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनसँगै उपाध्यक्ष र सदस्यहरू फेरिंदा कसैले पनि लामो अवधि काम गर्न पाएनन् । योजनाका लक्ष्य र प्राथमिकता पनि छिटो–छिटो फेरिन थाले । विषयमा दक्खल भएका र नयाँ विचार दिनसक्ने नभई राजनीतिक पहुँच भएकाहरू नियुक्त हुन थाल्दा आयोग साँच्चिकै ‘थिंक ट्यांक’ बन्न सकेन ।
बजेटसँग पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरूको तालमेल मिल्न छाडेपछि आयोगको योजना कार्यान्वयन प्रभावहीन हुन थाल्यो । उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको दृष्टिकोण अनुसारको योजनामा राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीले असहयोग गरेको सुनियो । त्यस्तै मतभिन्नता हुँदा डा. पीताम्बर शर्माले तीन महीनामै उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । बजेट निर्माणमा आफूसँग सल्लाह नलिएपछि अर्का उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट भाषण बहिष्कार गरेका थिए ।